अन्तराष्ट्रिय || Rising Khabar
काठमाडौ १७ साउन . पाकिस्तानले नयाँ प्रधानमन्त्री इमरान खानको शपथग्रहण समारोहमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सरकार प्रमुखहरुलाई निम्तो दिने तयारी गरेको छ। पाकिस्तान र भारतका सञ्चार माध्यमहरुले अगस्ट ११ मा हुने भनिएको शपथग्रहणमा छिमेकीसहित सार्कका सरकार प्रमुखलार्इ निम्ता ...
काठमाडौ २७ माघ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले दक्षिण कोरियाको राजधानी सोल आफूलाई चिरपरिचित लागेको बताएकी छन्। हिउँदे ओलम्पिकको अवसरमा पहिलो पटक उनी दक्षिण कोरिया पुगेकी हुन्। शनिबार साँझ औपचारिक रात्रीभोजका क्रममा गंगवन ...
जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनलाई उत्तरको ‘स्माइल डिप्लोमेसी’ मा नफस्न चेतावनी दिएका छन्। उनले उत्तर कोरिया जसरी पनि आणविक हतियार विकासमा लागिपरेको बताए। मुन र आबे हिउँदे ओलम्पिक उद्घाटनअघि पायोङचाङमा भेट भएका थिए। मुनले दुई कोरियाबीचको ...
फ्लोरिडा- उद्यमी एलोन मस्कले कारसहितको आफ्नो नयाँ रकेट फाल्कोन हेभीलाई केनेडी स्पेस सेन्टरबाट प्रक्षेपण गरेका छन्। हालसम्मकै विशाल भारवहन क्षमता तथा शक्तिशाली सटल सिस्टम भएको उक्त रकेट कुनै प्रतिरोधबिना एटलान्टिक महासागरस्थित स्पेस सेन्टरबाट मंगलबार प्रक्षेपण भएको हो। प्रक्षेपण अगाडि रकेटको जोखिमको ...
काठमाडौ २३ माघ । पछिल्लो समय एप्पलका दिवंगत संस्थापक स्टिभ जब्सकी कान्छी छोरीको चर्चा चुलिएको छ। किशोरावस्था पार गर्नै लागेकी इभ जब्स आफ्नो भव्य जीवनशैलीका कारण चर्चामा आएकी हुन्। १९ वर्षीया इभ प्रसिद्ध स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढ्छिन्। सोही विश्वविद्यालयमा उनका आमाबुबाको भेट ...
काठमाडौ २२ माघ । दक्षिण कोरियाको एक अदालतले सामसुङ कम्पनीका प्रमुख ली जे योङको सजाय निलम्बन गरेपछि उनी जेलमुक्त भएका छन्। उनलाई गत अगस्टमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार आरोपमा दोषी पाइएपछि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो। तर सोमबार पुनरावेदन अदालतले ...
हवाना, १९ माघ । क्युवाका पूर्व राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोका कान्छो छोरा क्यास्ट्रो डायज बलार्टले आत्महत्या गरेको समाचार छ । केही महिनादेखि विरामी उहाँ पछिल्लो समयमा ‘डिप्रेसन’ मा हुनुहुन्थ्यो । बिहीबार बिहान उहाँले आत्महत्या गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । क्युबाको राज्य ...
शरणार्थी स्वदेश फर्किने वातावरण अझै भएन : राष्ट्रसंघ
संयुक्त राष्ट्रसंघ, १८ माघ . लामो समयको गृहयुद्धका कारण देश छोडेर भागेका सिरियाली शरणार्थी घर फर्किन चाहेको भए पनि उनीहरु फर्किनसक्ने सुरक्षित वातावरण बन्न नसकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । सिरियाली शरणार्थी अधिकांश लिबिया र अरु कतिपय छिमेकी देशमा बसिरहेका र ...
साउदीका अर्बपति राजकुमार जेलमुक्त
साउदी अरब १४ माघ । साउदी अरबका अर्बपति राजुकमार अलवालिन बिन तलाल थुनामुक्त भएका छन्। भ्रष्टाचारको अभियोगमा उनी पक्राउ परेका थिए। दुई महिनाभन्दा बढी समय जेल जीवन बिताएपछि उनी थुनामुक्त भएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। रोयटर्सलाई रियादस्थित अपुलेन्ट रिट्ज—कार्लटन ...
टर्कीले सिरियामा गरेको आक्रमणपछि उसलाई संयमता अपनाउन आग्रह
वासिङ्टन, ८ माघ । टर्कीले सिरियामा गरेको आक्रमणपछि उसलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । टर्कीले सिरियास्थित कुर्दिस लडाकू समूहविरूद्ध स्थलगत रुपमा पनि सैन्य कारबाही थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उसलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका समाचारमा जनाइएको छ । उत्तरी सिरियाको अफ्रिन नामक ...
सोल, ७ माघ उत्तर कोरियाली सरकारी अधिकारीहरु सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डल आइतबार दक्षिण कोरिया पुगेको समाचार छ । अर्को महिना दक्षिण कोरियामा आयोजना गरिएको शीतकालीन ओलम्पिक खेलकूदमा उत्तर कोरियाको सहभागिता सुनिश्चित भएकोले सो खेलमा आफ्नो सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको अनुगमन ...
न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीद्वारा आफू गर्भवती भएको घोषणा
काठमाडौ ५ माघ । न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्दा आर्डेनले सामाजिक सञ्जाल मार्पmत आफू गर्भवती भएको खुलासा गरेकी छिन्। उनले आफू र आफ्ना पार्टनर क्लार्क गेफोर्ड आगामी जुन महिनामा आमाबुबा बन्ने आशामा रहेको बताएकी छन्। ‘२०१७ भव्य वर्ष थियो भन्ने हामीले ठानेका थियौँ!’ ...
काजकिस्तानमा सडक दुर्घटनामा ५२ को मृत्यु
आस्ताना, काजकिस्तान, ४ माघ । उत्तरपश्चिम काजकिस्तानमा बिहीबार भएको सडक दुर्घटनामा ५२ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । गुडिरहेको सो बसमा आगलागी भएको सङ्कटकालीन सेवा मन्त्रालयले बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा जानकारी दिएको छ । बिहीबार बिहान १०ः३० बजे भएको यस दुर्घटनामा दुई जना ...
१५५ यात्रुलाई पानीमा अवतरण गराई सकुशल बचाउने 'हिरो पाइलट'को अनुभव
एजेन्सी ३ माघ । यो हरेक यात्रुका लागि मृत्युलाई स्पर्श गरेको सपना जस्तो थियो। जतिबेला ककपिटबाट पाइलटको आवाज जहाजभरि गुन्जियो, ‘इन्जिन पावरमा आएको खराबीका कारण युएस एयरवेजको एयरबस ३२०ए विमान तल झर्दैछ। कृपया यसका लागि आफूलाई तयार बनाउनुहोस्।’ यो घटना आजभन्दा ...
ट्युनिस, ३० पुस । ट्युनिसियाको सरकारले एकहप्ता लामो आन्दोलनपछि शनिबार सामाजिक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य सेवासम्वन्धी बजेट बढाउने र सरकारका अरु पनि विभिन्न सेवामा सुधारगरी सामाजिक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । सामाजिक मामिलामन्त्री मोहम्म ट्रबेल्सीले स्वास्थ्य सेवा ...
आप्रवासीबारे कुरा गर्दैगर्दा ट्रम्पले मुख छाडे
काठमाडौ २८ पुस । आप्रवासीहरुको विषयमा सांसदहरुसँग कुरा गर्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतिले उनीहरुप्रति अभद्र टिप्पणी गरेका छन्। हाइटी, एल साल्भाडोर र अन्य अफ्रिकी देशबाट अमेरिका भित्रिएका आप्रवासीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। ‘हामी किन यस्ता देशका मानिस लिइरहेका छौ?’ ...
मेक्सिकोको सीमामा पर्खाला लाउनुपर्छ : राष्ट्रपति ट्रम्प
वासिङ्टन, २७ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको अमेरिकी सीमामा पर्खाल लगाउने आफ्नो पुरानो कार्यक्रम यथावत नै रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले हाल रिपब्लिकन र डोमोक्र्याटहरुबीच भइरहेको वार्तामा पनि आफ्नो यो एजेण्डालाई कानुनकै रुपमा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ । ...
एजेन्सी, २४ पुस । इरान संसारकै एउटा यस्तो राष्ट्र हो जहाँको कानून बुझ्न धेरैका लागि क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यहाँको कानून विश्वलाई नै चकित तुल्याउने किसिमको छ । त्यहाँको कानूनले हात मिलाउनदेखि यौन सम्पर्क गर्नसम्म धेरै किसिमका बन्देज ...
साउदी अरब २३ पुस । साउदी अरबको प्रहरीले साउदी राजा सलमान विन अब्दुल्लाजिज अल साउदको सत्ता विरोधी गतिविधिमा सम्लग्न भएको आरोपमा ११ जना राजकूमारलाई पक्राउ गरेको स्थानीय शब्क अनलाइन समाचार संस्थाले शनिबार जनाएको छ। दरबारमा रहेर दरबार विरोधी गतिविधि गरेको ...
दक्षिण अफ्रिकामा बिहीबार भएको रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २०
जोहानेस्बर्ग, २१ पुस . दक्षिण अफ्रिकामा बिहीबार भएको रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २० पुगेको छ । यस घटनामा घाइते हुने व्यक्तिको सङ्ख्या २६० पुगेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ । रेलको तीन वटा डिब्बा नै जलेको कारण ...
द्वन्द्वको मारमा अफगानिस्तान, सन् २०१७ मा ४ लाख भन्दा बढी नागरिक विस्थापित
अफगानिस्तान १९ पुस । अफगानिस्तानमा जारी द्वन्द्वको कारण सन् २०१७ मा मात्र ४ लाख ४५ हजार भन्दाबढी सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला समन्वयसम्बन्धी कार्यालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार यस वर्ष ती नागरिक विस्थापित भएका हुन्। अफगानिस्तानमा जारी द्वन्द्वमा ...
संयुक्त राष्ट्रसंघ, १८ पुस : संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष (युनिसेफ)ले सन् २०१८ को जनवरी १ का दिनमात्र विश्वमा तीन लाख ८६ हजार शिशु जन्मिएको अनुमान गरेको छ । यसरी जन्मेकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम विकसित देशका रहेको सो संस्थाले जनाएको ...
युगाण्डामा क्रिसमस पर्वका समयमा सडक दुर्घटनाबाट २६ जनाको मृत्यु
युगाण्डा, १४ पुस । युगाण्डामा क्रिसमस पर्वका समयमा सडक दुर्घटनामा परी २६ जनाको मृत्यु भएको युगाण्डाको ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ताले शुक्रबार बताएका छन् । प्रहरीको ट्राफिक तथा सडक सुरक्षा निर्देशनालयका प्रवक्ता चाल्र्स सेवाम्बुलिडद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, क्रिसमस समय अर्थात् ...
नयाँ दिल्लीमा बाक्लो हुस्सुका कारण रेलसेवा अवरुद्ध
नयाँ दिल्ली, १२ पुस । नयाँ दिल्लीमा बाक्लो हुस्सु लागेका कारण बुधबार यहाँको रेलसेवा अवरुद्ध भएको समाचार छ । भारतीय राजधानी नयाँ दिल्ली र यस वरपरका स्थानमा बुधबार बिहानैदेखि लागेको बाक्लो हुस्सुको मात्रा नघटेको र झन बढ्दै गएपछि रेलसेवा अवरुद्ध ...
भारत नियन्त्रित काश्मिरमा आतङ्ककारी कमाण्डर मारिए
श्रीनगर, काश्मिर, ११ पुस । प्रायः अशान्त भइरहने भारत नियन्त्रित काश्मिरमा अर्ध सैन्य बलसँग भएको दोहोरो गोली हानाहानमा परी मङ्गलबार एकजना वरिष्ठ आतङ्ककारीको मृत्यु भएको समाचार छ । भारत नियन्त्रित काश्मिरको ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगरबाट करिब २८ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पुल्वाना ...